19 February 2019 ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲ / PKPF (တိုးတက်သော ကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ရှိ ကန္ဒာဟေဝန် ပန်းခြံအတွင်း တည်ထားသည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်တုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တု ကန့်ကွက်ကော်မတီနှင့် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ တို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က ပထမဆုံး အ ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာ သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲ ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တု မထားရှိရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ ဦးဆောင်သူများနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်က တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းပြီးနောက် ရရှိလာသည့် သဘောတူညီချက်များအရ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၇ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီက လွိုင်ကော်မြို့ အင်ပါယာ ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ် ခဲ့ရာ ကရင်နီ ပြည် ပြည်သူများ ကိုယ်စားပြု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမှ ကိုယ်စား လှယ် ၆ ဦးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦးတို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်း ဆွေးနွေးမှု ပြီးနောက် ကော်မတီ နှစ်ဖက်စလုံးမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ အသီးသီးမှာ ကွဲလွဲ မှုများ ရှိနေရာ နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှု အခြေအနေ၊ ရှေ့ဆက်အလားအလာများ၊ ကွဲလွဲနေသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများကို ဧရာဝတီ၏ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ဇူးဇူးက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါ သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲ/ PKPF (တိုးတက်သော ကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု
ခွန်းအသန်း ( ကရင်နီပြည် ပြည်သူများကိုယ်စားပြု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ)
မေး – မနေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက ဘယ်လို ဖြစ်သွားပါသလဲ။
ဖြေ – ကျနော်တို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ။ သဘောတူညီမှု တစုံတရာ မရှိဘဲနဲ့ တဖက် ကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ရုတ်တရက် အစည်းအဝေးခန်း ကနေ ထွက်သွားတဲ့ အတွက် အစည်းအဝေး ပျက်သွားတဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ ရက်နေ့တုန်းက ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ဒီက ကိုယ်စားလှယ်(ကြေးရုပ် ကန့်ကွက် ရေး ကော်မတီ) တွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး စာချုပ်ချုပ်ပြီး သဘောတူညီမှုရတဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အစိုးရက ပြောတာက ဒီကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကို အစိုးရက လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ ဆိုပြီးမှ ပရဟိတအဖွဲ့တွေက ဦးစီးပြီး လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ် တယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းရေးကိုလည်း သူတို့မှာပဲ အလုံးစုံ တာဝန်ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့ပဲ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပါဆိုပြီး ပြော တယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။ ဒါပေမယ့် အစည်း အဝေးမှာ ဖြစ်မြောက် ရေး ကော်မတီက ပြောတာက ဒီကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးကို ကြေးရုပ် သယ် ဆောင်တာနဲ့ ဖွင့်ပွဲကျင်းပတာ နှစ်ခုပဲ တာဝန် ယူရတယ်။
ဒီကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ အတွက် စတင် အကောင်အထည် ဖော်တာ၊ ငွေကြေးစိုက် ထုတ်တာ အားလုံး က ကယားပြည်နယ် အစိုးရက လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။
သူတို့ ကြေးရုပ်ကို သွားပြီး သယ်ဆောင်တာနဲ့ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပတာတောင်မှ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို သိန်း ၄၀၀ လောက်က ပြည်နယ်အစိုးရကပဲ ပေးတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က ဒီကြေးရုပ်အပေါ် မှာ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူနိုင်တာ မဟုတ် ဘူး။
ကြေးရုပ် ဖယ်ရှားရေး/ မဖယ်ရှားရေး ဆိုတာ ဆွေးနွေးဖို့ သူတို့မှာ တာဝန်မရှိဘူး။ သူတို့က ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပပေးပြီး ပြည်နယ် အစိုးရကိုပဲ အကုန်လုံး ပြန်လည် လွှဲအပ်ပြီး ပြီမို့ ဒါတွေအားလုံးက ပြည်နယ် အစိုးရ မှာပဲ တာဝန်ရှိတယ်။ အဲဒီလိုပြောပြီး သူတို့ကတော့ တာဝန် မယူနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ကလည်း ဒီကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက ဒီကိစ္စနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိဘူး။ ကျနော် တို့က ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပဲ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းရမယ် ဆိုတဲ့ဟာကို အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်မယ် ပြောတော့ သူတို့က မှတ်တမ်း မတင်ဖို့ ကန့်ကွက်တယ်။ သူတို့ ဒီလိုဆွေး နွေးတာကိုလည်း အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအဖြစ် မှတ်တမ်း မတင်နိုင်ဘူး။ တာဝန်မယူနိုင်ဘူး အဲဒီလို ပြောပါတယ်။
သူတို့ဘက်က ဆွေးနွေးချက် တွေကို မှတ်တမ်းအဖြစ် မတင်ဘူးဆိုတော့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို တာဝန် မယူတဲ့ သဘော လားလို့ ပြောတော့ သူတို့ ပြောတာကို သူတို့ တာဝန်ယူတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေး ချက်ကို တာဝန်မယူဘူး စသဖြင့် ရှေ့ နောက် မညီညွတ်တဲ့ စကားတွေ ပြောပြီးမှ ရုတ်တရက်ကြီး အစည်းအဝေးခန်းထဲကနေ ထထွက်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထူးခြားချက်က သူတို့ဘက်က အဲဒီလို ထမထွက်သွားခင် ဆွေးနွေးနေတုန်း ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦး ဝင်းအောင်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ထွေအုပ်က ဖုန်းဆက်တယ် ဆိုပြီးမှ သူက ကျနော်တို့ ကို ခွင့်တောင်းပါတယ်။ ကျနော် ဖုန်း ထ ဖြေမယ်နော် ဆိုပြီးမှ ဖုန်းထဆက်တယ်။ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန် ဝင်လာပြီးခါမှ အဲဒီလို ရုတ်တရက်ကြီး အခြေအနေကို တင်းတင်း မာမာဖြစ်အောင် ဖန်တီးပြီး ထပြန် သွားတဲ့ အခြေအနေမျိုး အဲဒီလို ထူးခြားချက်တော့ တွေ့ရတယ်။
မေး – နောက်ထပ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ ရှိအုံးမလား ဒါမှမဟုတ် လုံးဝ ပျက်သွားပြီလား။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လမ်းစဉ်ကတော့ ပိတ်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြည်နယ် အစိုးရကလည်း သူတို့ဆီမှာ တာဝန်မရှိဘူး။ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီနဲ့ တွေ့ပါလို့ ပြောတယ်။ ဖြစ် မြောက်ရေး ကော်မတီနဲ့ တွေ့တော့ လည်း သူတို့မှာလည်း တာဝန်မရှိဘူး။
သူတို့လည်း တာဝန်မယူ နိုင်ဘူး။ ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ပဲ ပြောပါလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့ အပြင် အစည်းအဝေးကိုလည်း သူတို့က ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု တစုံတရာ မလုပ်ဘဲ၊ ဘာမှအပေးအယူတွေ မလုပ် ဘဲနဲ့ ဒီတိုင်း ထပြန် သွားတဲ့ သဘောဖြစ်တော့ ကျနော်တို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး လမ်းစဉ်ကတော့ ပိတ်သွားပြီလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဘက်က ဆွေးနွေးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖွင့်ထားခဲ့ပေမယ့် သူတို့ဘက်က ဆွေးနွေးမှုကို တမင်တကာ ပျက်ပြား အောင် ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လာတာ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့ သူတွေက ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့ သူတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။
အစည်းအဝေးခန်းမှာပဲ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနနဲ့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းပြောပြီးမှ သူတို့က ကျနော် တို့ကို ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုကလည်း ထိရောက်မယ့် အလားအလာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။
မေး – ဒီတော့ ရှေ့ဆက် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ။
ဖြေ – ၁၂ ရက်နေ့တုန်းက ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရဆို ပြည်နယ် အစိုးရကပဲ ဒီကြေးရုပ် ဖယ်ရှားရေး ကို တာဝန်ယူပြီး လုပ် ပေးရမယ့် သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကယားပြည်နယ် အစိုးရဘက်က အဲဒီကိစ္စကို အကောင်အထည် မဖော်ဘူးဆို ရင် ဒီဘက်က ပြည်သူ လူထုတွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်းပဲ သူတို့ တွေ ကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားမလား။ သို့မဟုတ် ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင် မလဲ မပြောတတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ သေချာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။
မေး – တွေ့ဆုံမှုအပြီး ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကော်မတီနှစ်ခုရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ ကွဲလွဲနေတာ ကရော ဘယ်လိုဖြစ်တာ ပါလဲ။
ဖြေ – သူတို့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အဓိက ဖော်ပြတာက ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်နယ် အစိုးရနဲ့ ချုပ်ဆိုတဲ့ သဘောတူ စာချုပ်ပါ အချက်တွေကို အစဉ်လိုက် မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ အောက်ဆုံးက (ကြေးရုပ်ဖယ်ရှားရေး) ဟာကို ဆွေးနွေးတဲ့ အတွက် အစည်းအဝေး ပျက်တယ်လို့ သူတို့က သုံးနှုန်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ၁၂ ရက်နေ့ စာချုပ်ကို မဖတ်ဖူးတဲ့ သူ တွေ အတွက်တော့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာချုပ်ကို ပြန်ပြီးမှ ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အစည်းအဝေးပွဲ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အခြေအနေကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်က စွပ်စွဲချက်ကတော့ စာချုပ်ကို မမြင်ဖူး မဖတ်ဖူးတဲ့ သူတွေအတွက်ကို ဇဝေ ဇဝါဖြစ်အောင် တမင်တင်တဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးဝင်းအောင် (လောပိတဖောင်ဒေးရှင်း – ဥက္ကဋ္ဌ) (ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ)
မေး – မနေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခြေအနေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားပါသလဲ။
ဖြေ – ကန့်ကွက်ကော်မတီက ကျနော်တို့ ရုပ်တု ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကို တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းချင် ပါတယ်လို့ ကမ်းလှမ်းထား တာကြောင့် ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ အင်ပါယာ ဟိုတယ်မှာ တွေ့ဆုံဖို့ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပထမဆုံး ဘတ်ဂျက် အနေအထားတွေ မေးတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ပြောပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အစဉ်တစိုက် မေးလာတဲ့ မေးခွန်းက ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်ကို ဖယ်းရှား ရေး၊ ဖြုတ်ချရေး အဲဒါကိုပဲ သူတို့က ဦး တည် မေးကြတာ။
ကျနော်တို့ကလည်း ဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင် ရွက်ထားတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း ဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ဖြုတ်ပေးဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ အများပြည်သူရဲ့ ပိုက်ဆံ တွေနဲ့ လုပ်ထားတာ။ ကျနော်တို့မှာ လည်း ထောက်ခံတဲ့ အင်အားတွေ အပြည့်အဝရှိတယ်။ ဒါ ဖြုတ်ပေးလို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
တခြား ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ စဉ်းစားပေးဖို့ ပြောတော့ သူတို့ကလည်း ဆန္ဒပြ ကန့် ကွက်တာတွေ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ ဖြုတ်ချရေးကိုပဲ အဓိက အဖြေလို ချင်တာ။ ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအနေနဲ့ ကလည်း ဖြစ်မြောက်အောင်တောင် မကဘူး။ အကောင် အထည်ဖော်ပြီးလို့ စိုက်ထူပြီးသွားပြီ။
ထောက်ခံပွဲမှာလည်း ပြည်သူက အင်နဲ့အားနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖြုတ်ချဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး။ နိုင်ငံသိ ကမ္ဘာသိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထောက်ရှုပါ။ ဖြိုဖျက်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့။
ကယားဌာနေ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရုပ်တုတွေနဲ့ ဝန်းရံပြီးတော့ လုပ်ချင်ရင်လည်း ကျနော်တို့တွေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ် ကူညီပါ့မယ် ဆိုတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ရုပ်တုလုပ်ဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီ ဦးအောင်ဆန်း ရုပ်တုကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ပဲ ပြောတာ။ မဖယ်ရှားရင်လည်း ကျနော်တို့နည်း ကျနော် တို့ဟန်နဲ့ ဖယ်ရှားရလိမ့် မယ်ပေါ့။ သူတို့က အဲဒီလိုမျိုး တောင်းဆိုတာ။
အဲဒါဆို ကျနော်တို့ ညှိနှိုင်းပွဲက အဖြေကောင်း ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ အဖြေ ကောင်း ထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့က ပြောတယ်။ အဖြေကောင်း ထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်မယ့် အတူတူ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးလည်း ဆွေးနွေး ချင်တဲ့ စိတ် မရှိတော့ဘူးတဲ့ အဲဒီလို အခါခါ ပြောတယ်။
ကျနော်တို့က မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တပတ်မှာ ပြန်လည် ဆုံစည်း ပြီး အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေ ပုံဖော်ရအောင်လား။ တို့တွေက ညီအစ်ကို မောင်နှတွေပဲ။ အကောင်းဆုံး ရလဒ်တွေကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ကြရအောင်လို့ ပြောတော့ ကျနော်တို့ နောက်ထပ် တွေ့ဖို့လည်း စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ သူတို့က ပြောတယ်။
နောက်တပတ်လည်း မဆုံတွေ့ချင်တော့ပါဘူးလို့ ပြောတော့ အစည်းအဝေးက ရပ်နားသွားလိုက် ရတာ ပေါ့။
မေး – အစည်းအဝေး မပြီးခင် ထပြန် သွားတယ် ဆိုတာကရော ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ – သူတို့ဘက်က တိုက်ရိုက်(live) လွှင့်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဦးတည်ချက်ကိုက သူတို့က လုံးဝ ဖြုတ်ချရေး၊ ကျနော်တို့က အကောင်အထည် ပေါ်အောင် ဆောင်ရွက်ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုံးဝ ဖြုတ်ချလို့တော့ အဆင်မပြေဘူး။ နောက် တပတ်မှာ ဆက်လက်ပြီး ဆွေးနွေးပါလို့ တောင်းဆိုတာကို သူတို့က လက်မခံဘူး။ လက်မခံတဲ့အတွက် အစည်းအဝေးက ပျက်သွားတဲ့ သဘောလေးပါ။ ပွဲပျက်သွားတဲ့အတွက် ထပြန်တဲ့ သဘောမျိုးပဲ ရှိပါတယ်။
မေး – ဒါဆို ဒီကော်မတီ နှစ်ခုက ဆက်လက် ဆွေးနွေးမယ့် အလားအလာ မရှိတော့ဘူးလား။
ဖြေ – သူတို့ ကန့်ကွက်ရေး ကော်မတီ အနေနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ ထပ်မံပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုလျက်ပါပဲ။ ကျနော် တို့က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ချည်းပါ။ အပြုသဘောကို ဆောင်တဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းမျိုးကို လိုလိုလားလား လက်ခံပါတယ်။ အချိန်မရွေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာကို လက်ခံကြို ဆိုပါတယ်။
မေး – ကြေးရုပ် ဖယ်ရှားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့သာ ဆွေးနွေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့တယ် ဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ – ဟာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါက သူတို့ ကန့်ကွက်တဲ့ ကော်မတီက တဖက်သတ် လိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မဟုတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်ပြီး တော့ လိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီး တိုက်ပွဲ မဝင်ချင်ပါ ဘူး။
တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတဲ့ ကာလမှာ ကျနော်တို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ သူတို့ live လွှင့်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒါ က အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လိုင်းပေါ်မှာ ရေးထားတာ ကတော့ သူတို့ရဲ့ တဖက်သက် စွပ်စွဲချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အစိုးရအပေါ်မှာ ပုံချတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
မေး – ဒါဆို ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီက ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ် စိုက်ထူရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်အချိန် ကတည်း တာဝန်ယူ ဆောင် ရွက်ခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ – ကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ရတာကတော့ ကြေးရုပ်လုပ်နေပြီဆို ကတည်းကပါ၊ ကန့်ကွက်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့(ကန့်ကွက်သူ) ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။
ဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ ဝန်ကြီး ချုပ်က လူနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒကို ဦးစားပေးတဲ့ အနေနဲ့ လေးစား လိုက်နာသော အားဖြင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း တရပ်အနေနဲ့ မလုပ်တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တွေက လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေး ရှိရင်တော့ နိုင်ငံရဲ့ ဗိသုကာကြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ခွင့်ပြုပေးမယ်ပေါ့။
ကျနော်က လောပိတဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တယောက်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကလည်း လုပ်ချင်တာ ပေါ့ဗျာ။ လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးရဲ့ ပုံတူရုပ်တုဆိုတော့။ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ အဖွဲ့ထဲက တယောက်ကနေ ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်လို့ ပြောတော့ ကျနော်ကလည်း လောပိတ ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ‘ဟုတ်ကဲ့’ ကျနော် တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပါမယ်လို့ လက်ခံလိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းလိုက်တာက ၂၃. ၉. ၂၀၁၈ နေ့မှာ အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ သေချာစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ မဖွဲ့စည်းခင်မှာ ကျနော်တို့ ဖောင်ဒေးရှင်းရယ် တ ခြား လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တွေရယ် သုံးကြိမ်လောက်တွေ့ဆုံပြီး ပဏာမ ဆွေးနွေးပွဲလေးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ကျနော်တို့ ကြေးရုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ ကြေးရုပ် အစကနေ အဆုံး ဖွင့်ပွဲ ပြီးတဲ့ အထိပေါ့။ ကျ နော်တို့မှာ ဘတ်ဂျက် နည်းတဲ့အတွက် မည်ကာမတ္တ ဖွင့်ပွဲလေးပါပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေ တက် ရောက်ခဲ့ကြတာပေါ့။
အလွန်စည်စည်ကားကားကြီး မဟုတ်ဘူး။ ငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ အခါကျတော့ ဧည့်ခံတာ ကျွေးမွေး တာတွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မေး – ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တု ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက် အသုံးပြုခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ – ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ကြေးရုပ်ကို ကန့်ကွက်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးပေး ဆောင်ရွက် တဲ့ အနေနဲ့ မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ ကျနော်တို့ကို လက်ပြောင်း လက်လွှဲယူပြီး ကော်မတီဖွဲ့ပြီးတဲ့ အချိန် ပထမဆုံး ကျနော်တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆိုပြီး လူမှုရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ ပေါင်းပြီး ခေါင်းစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အလှူငွေဖြတ်ပိုင်း ဆိုပြီး ရေးပြီးတော့ ဒေသအသီးသီး ကျေးရွာအသီးသီးကို ဘောင်ချာလေးတွေ ပို့ ပြီး ကျနော်တို့က အလှူငွေ ခံပါတယ်။
သိန်း ၂၀၀ ကျော် ရပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်က မြင့်မားတော့ ကျနော်တို့ အလှူခံလို့ရတဲ့ ပမာဏက ကြေးရုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အ နေအထား မဖြစ်တော့ ကျနော်တို့ ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဆီ သွားပြီး အလှူခံပါတယ်။
ကယားပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ကလည်း နဂိုကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်လုပ်ချင်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဆိုတော့ ကျနော်တို့ကို သိန်း ၄၀၀ လှူ ပေးလိုက်တယ်။ စုစုပေါင်း သိန်း ၆၀၀ ကျော် ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
မေး – လက်ရှိ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာများ ဖြည့်စွက်ချင်တာ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ – ကန့်ကွက်တဲ့ အဖွဲ့ကို ဘာပြောချင်လဲဆို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ ဗိသုကာကြီး။ မြန်မာ သာမက ကမ္ဘာကပါ အသိအမှတ် ပြုထားတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ကျနော်တို့ ကယားပြည်နယ်မှာ စိုက်ထူထားခြင်းဟာ ကောင်းသော ရလဒ်တွေကိုပဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ လုပ်ခဲ့တာ။
ကန္ဒာဟေဝန် ပန်းခြံမှာ ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီး ကြေးရုပ်ကြီး စိုက်ထူထားခြင်းဖြင့် ဒါကိုမြင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် ကဲ့ သို့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့ ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင် တာဖြစ်လို့ မေတ္တာ ရပ်ခံတာပေါ့နော် ကန့်ကွက်သူတွေ အနေနဲ့ မနှောင့်ယှက်ကြပါနဲ့။
သူ့ရဲ့အထုပ္ပတ္တိ သူ့ရဲ့ အနစ်နာခံ ချက်တွေကို နောက်မျိုးဆက်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့ သူလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ပေါ်ထွန်းလာဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကန့်ကွက်မှုတွေ ဖျက်ဆီးမှုတွေ မလုပ်ဖို့ ကျနော် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်တာက ကျနော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မြင်းစီးကြေးရုပ်ကို လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တွေ ဦးဆောင်ပြီး အများပြည်သူ ထည့်ဝင်တဲ့ ငွေတွေနဲ့ အောင်မြင်စွာ စိုက်ထူပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်ကိုလည်း အပ်ထားပြီးပါပြီ။
အဲဒါ ကို ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ ကန့်ကွက်တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ ဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကြေးရုပ်ကို ဖျက်ဆီး မယ် ရွှေ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ တာဝန်ယူပြီးတော့ ကာကွယ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင် ပါတယ်။ ကျနော်တို့က လုပ်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီ။ ဒါ နိုင်ငံတော်ပိုင် ပစ္စည်းပါ။ နိုင်ငံတော်က ကာကွယ်ပေး ပါလို့ အစိုးရကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။